Gye Yehowa Mmara a Ɛfa Abrabɔ Ho no Tom
KENKAN WƆ Abui Acholi Afrikaans Aja Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Ateso Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mende Mexican Sign Language Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Yehowa Nyankopɔn akyerɛ nnipa sɛnea ɛsɛ sɛ wɔbɔ wɔn bra. Ɛho nhwɛso ne sɛ, Onyankopɔn ahyɛ sɛ ɔbea ne ɔbarima na ɛsɛ sɛ wɔware, na ɛnsɛ sɛ wɔtetew mu. (Mt 19:4-6, 9) Ɔkasa tia nna mu ɔbrasɛe biara. (1Ko 6:9, 10) Sɛnea ɛsɛ sɛ ne nkurɔfo siesie wɔn ho, ne ntade a ɛsɛ sɛ wɔhyɛ mpo, wɔama wɔn ɛho akwankyerɛ na ama wɔada nsow.—De 22:5; 1Ti 2:9, 10.
Ɛnnɛ, nnipa pii mfa Yehowa gyinapɛn anaa ne mmara nyɛ hwee. (Ro 1:18-32) Mmom, ntadehyɛ ne ahosiesie a aba so ne sɛnea nnipa dodow no ara bɔ wɔn bra na wodi akyi. Nnipa bebree yɛ bɔne akɛseakɛse de hoahoa wɔn ho, na sɛ obi nyɛ nea wɔyɛ no bi a wɔkasa tia no.—1Pe 4:3, 4.
Yehowa Adansefo deɛ, Onyankopɔn mmara a ɛfa abrabɔ ho no, ɛsɛ sɛ yɛde akokoduru gyina akyi. (Ro 12:9) Yɛbɛyɛ no sɛn? Ɛsɛ sɛ yɛfa anifere kwan so ma nkurɔfo hu abrabɔ a Yehowa pene so. Yɛn ankasa nso, ɛsɛ sɛ yɛkɔ so ma yɛn abrabɔ ho tew; ɛnsɛ sɛ efĩ ne nkekae biara ba ho. Yɛmfa no sɛ yɛrepaw ntade a yɛbɛhyɛ ne sɛnea yebesiesie yɛn ho. Yebetumi abisa yɛn ho sɛ: ‘Yehowa gyinapɛn anaa ne mmara na ɛkyerɛ me kwan anaasɛ wiase no deɛ? Ntade a mehyɛ ne sɛnea misiesie me ho kyerɛ sɛ meyɛ Kristoni a misuro Nyankopɔn?’ Anaa yɛmfa no sɛ yɛrepɛ sini anaa dwumadi bi ahwɛ. Yebetumi abisa yɛn ho sɛ: ‘Yehowa ani begye sini anaa dwumadi yi ho? Ɛbɛma mabɔ me bra sɛnea Yehowa pɛ anaa sɛnea wiase no pɛ? Nneɛma a mede gyigye m’ani no, ɛbɛma ayɛ den ama me sɛ mɛbɔ bra pa? (Dw 101:3) Ebetumi ato m’abusuafo ne afoforo hintidua?’—1Ko 10:31-33.
Sɛnea Yehowa pɛ sɛ yɛbɔ yɛn bra no, adɛn nti na ehia paa sɛ yegye tom? Ɛrenkyɛ biara Kristo Yesu bɛsɛe amanaman no, na wayi abɔnefosɛm nyinaa afi hɔ. (Hes 9:4-7) Wɔn a wɔreyɛ Onyankopɔn apɛde nko ara na ɛbɛka. (1Yo 2:15-17) Ɛnde, Yehowa mmara a ɛfa abrabɔ ho no, momma yennye ntom. Ɛno bɛma wɔn a wohu yɛn abrabɔ pa no ahyɛ Onyankopɔn anuonyam.—1Pe 2:11, 12.
Me ntadehyɛ ne m’ahosiesie kyerɛ sɛ hena mmara na ɛkyerɛ me sɛnea memmɔ me bra?
MONHWƐ VIDEO A YƐATO DIN BRA BƐYƐ YEHOWA ADAMFO—ƆBAA BAAKO, BARIMA BAAKO NO. MUWIE A, MUNSUSUW NSƐMMISA YI HO:
Adɛn nti na nyansa wom sɛ yɛde Yehowa gyinapɛn anaa ne mmara bɛbɔ yɛn bra?
Adɛn nti na ɛsɛ sɛ awofo de Yehowa mmara a ɛfa abrabɔ ho kyerɛkyerɛ wɔn mma fi wɔn mmofraase pɛɛ?
Ɛdɛn na mmofra ne mpanyin nyinaa betumi ayɛ de aboa nkurɔfo ama wɔanya Onyankopɔn papayɛ so mfaso?
ƐDƐN NA WOBƐKA BERE A OBI AKA SƐ . . .
“Wubu ɔbarima ne ɔbarima anaa ɔbea ne ɔbea nna sɛn?”
“Nea Bible ka fa ɔbarima ne ɔbarima anaa ɔbea ne ɔbea nna ho no ntease nnim!”
“Mmarima a ɛne mmarima da ne mmea a ɛne mmea da no, wɔrentumi nsesa; yɛde woo wɔn.”
(yp1-E ti 23; yp2-E ti 28)